कांग्रेसको विधानमा मनोनित र निर्वाचितको विवाद, किन जुटेन सहमति ? – purnakhabar.com
७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिबारे सहमति जुटाउने सम्भावना क्षीण बनेको छ ।
मस्यौदा समितिको अन्तिम बैठक भोलि बोलाइएको छ । समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सकेसम्म सहमतिकै प्रस्ताव बनाउन प्रयासरत छन् ।
तर, गुटगत अडान कायमै रहेकाले सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको एक सदस्यले बताए ।
के के विषयमा जुटेन सहमति ?
मस्यौदा समितिमा मिल्न नसकेको प्रमुख विषयहरु मध्ये एक हो– सदस्यता । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरुले सदस्य र मताधिकार प्राप्त सदस्य रहने प्रावधानको वकालत गरेका छन् । यो मूल प्रस्तावअनुसार पार्टीमा क्रियाशील सदस्य हुँदैनन् ।
तर, नवीन्द्रराज जोशीले सदस्य र क्रियाशील सदस्य रहने विद्यमान प्रावधान नै राख्नुपर्ने मत राखेका छन् । जोशीको मत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको अडान भएकाले उनी पछि अट्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलले भने निर्वाचन मण्डलको अवधारणा अघि सारेका छन् ।
सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो– पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धति ।
सुरुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर आफैं पदाधिकारी संख्या बढाउने पक्षमा थिए । तर, अहिले यो समूहका नेताहरु अहिलेकै कायमै राख्ने सहमतिमा जुटेका छन् ।
तर, नवीन्द्रराज जोशीले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ३/३ हुनु पर्ने मत राखेका छन् ।
अर्को सदस्य पौडेलले सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने मत अघि सारेका छन् । दुई उपसभापति राख्न र त्यसमा एउटालाई प्रशिक्षणको जिम्मा दिएर अर्कोले पार्टी सभापति नहुँदा वा सरकारमा जाँदा कार्यवाहक चलाउने उनको प्रस्ताव छ ।
संसदीय समिति गठनमा निर्वाचित र मनोनितको अनुपातमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
देउवा समूहका नेताहरुले पदाधिकारीबाहेक ६ जना मनोनित र ४ निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, जोशी र पौडेलको अडान निर्वाचित धेरै हुनुपर्नेछ ।
विधान मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति १२५ सदस्यीय बनाउने सहमति जुटेको छ ।
तर, सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सखस्यको संख्यामा विवाद छ । देउवा समूहका नेताहरुले २५ तथा जोशी र पौडेलले १५ मात्र हुनुपर्ने मत राखेका छन् ।
विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद चार वर्ष हुन्छ तर, विषेश परिस्थितिमा एक वर्षसम्म थप गर्न सकिन्छ । तर, अब विशेष परिपस्थिति भनेर पार्टी सभापतिले म्याद थपको प्रस्ताव ल्याउँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत वा दुई तिहाईले पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधान मस्यौदा समितिका सदस्य पौडेलले राखेका छन्, जसमा सहमति जुटेको छैन ।
मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले भने, ‘पदाधिकारी लगायतका केही विषय फरक प्रस्ताव पनि छ । भोलिको बैठकमा सहमतिको अन्तिम प्रयास हुन्छ ।’
दुर्इ दिनमै संस्थानको खसीबोका सकियो
Posted on October 15, 2018 Author purnakhabar
२९ असोज, काठमाडौँ । सरकारले दशैँका अवसरमा उपत्यकामा बिक्री गर्न ल्याएको ३०७ वटै खसीबोका बिक्री भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले मकवानपुरबाट ३०७ वटा खसीबोका खरिद गरेर ल्याएको थियो । दाङलगायत पश्चिमी जिल्लाबाट करिब हजार खसीबोका खरिद गर्ने लक्ष्य राखिए पनि संस्थानले पश्चिमी क्षेत्रबाट खसीबोका खरिद गर्न नसकेपछि मकवानपुरबाट ल्याएको हो । निजी क्षेत्रका व्यापारीले कृषकलाई […]
वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने ३ जना विचौलिया पक्राउ
६ मंसिर, काठमाडौं । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने तीनजना विचौलियाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका-१३ ताहचलस्थित श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभागबा बिहीबार दिउँसो उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा कालिमाटीका २४ वर्षीय सुरेन्द्र पाचकोटी, धादिङ जीवनपुरका २९ वर्षीय सुजन लामा र सर्लाही लालबन्दीका २६ वर्षे निर्मल […]
[ad_1] काठमाडौं । साहित्यकार जानु काम्बाङ्ग लिम्बुले एकै साथ दुई कृति सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनी ताप्लेजुङमा जन्मिएर हाल केही वर्षदेखि बेलायतको एक्सफोर्डमा बसोबास गर्दै आएकी छिन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिङ्गदेनको कथाकृति ‘नउघ्रेको जुन’ र गीति एल्बम ‘जानु’को लोर्कापर्ण भएको छ । नेपाल वाङमय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको उक्त समारोहमा वरिष्ठ साहित्यकार वैरागी […]